Ishidi yensimbi ekhangela i-coil reil NC lelver feeder ene-decoiler straightener feeder 3 kumatshini woku-1 weCoil ngqo wokuhambisa umatshini wokushicilela isinyithi
Inkcazo:Izixhasi zeServo Straightener,Cinezela i-feedener-feeder / i-uncoiler,Iinkqubo zekhoyili zecompact, Abaphathi bekhoyili kunye nabaLungelelanisi, Cinezela feedi,
Home > Imveliso > Umxhasi weCoil Straightener > I-NC Servo Straightener feeders
Iintlobo zeMveliso ze- I-NC Servo Straightener feeders , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Izixhasi zeServo Straightener , Cinezela i-feedener-feeder / i-uncoiler ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umtya weCoil weCompact wokuLungiselela iiNxalenye zeZithuthi  Qhagamshelana Ngoku
Imigca yeeCompact zoMthombo weServo Umxhasi we-Straightener Uncoiler  Qhagamshelana Ngoku
Isixhobo sokuhambisa izixhobo se-Uncoiler straightener  Qhagamshelana Ngoku
I-coil straightener feeder Intsimbi yokuhambisa isitampu  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wecompact Coil Line Servo ngqo othe ngqo umatshini wokuhambisa ukutya  Qhagamshelana Ngoku
Umtya okondla umtya we-Coil leveler kwi-auto stamping  Qhagamshelana Ngoku
I-NC servo feeder ene-uncoiler kunye ne-straightener  Qhagamshelana Ngoku
I-NC Servo Straightener feeder yokuqhobosha iipasita zokugcina isitampu  Qhagamshelana Ngoku
Isixhasi se-Decoiler straightener sokwenza izinto ezixineneyo  Qhagamshelana Ngoku
Umtya weCoil weCompact wokuLungiselela iiNxalenye zeZithuthi
UKUXELWA KWEXESHA LOKUFUMANELEKILEYO LOKUFUNDA IINXALENYE ZENGQESHO Umtya weCoil Coil wokuLondeza iiNxalenye zeZithuthi Ukucinezela kudibanisa feeder / ngqo neseyile enegesi. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo...
Imigca yeeCompact zoMthombo weServo Umxhasi we-Straightener Uncoiler
IZIBONELELO ZEEMFUNO ZESIQINISEKISO Imigca yokuCoca isiXabiso seKhonkco iServo feeder Straightener Uncoiler idibanisa feeder / i-straightener ene-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo...
Isixhobo sokuhambisa izixhobo se-Uncoiler straightener
UMNYANGO WOKUZIPHATHA NGOKUNYANZELEKILEYO WOKUFUMANELEKILEYO Isixhobo sokuhambisa umbane se-Uncoiler ngqo Coil Isixhobo sokuphatha sidibanisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi...
I-coil straightener feeder Intsimbi yokuhambisa isitampu
UMNYANGO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA Umxhasi we-coil straightener feed Metal isitampu sokudibanisa isitampu sidibanisa i-feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa...
Umatshini wecompact Coil Line Servo ngqo othe ngqo umatshini wokuhambisa ukutya
IMICIMBI YOKWENZA IMALI YOKWENZA ISIQINISEKISO Umatshini weCompact Coil Line Servo ngqo othe ngqo umatshini wokudibanisa udibanisa feeder / ngqo kunye isixhasi esinamandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo...
Umtya okondla umtya we-Coil leveler kwi-auto stamping
UKUFUMANEKA KWEXESHA LOKUXHASA UMNYANGO WESIQINISEKISO SE-EC Umtya okondla i- coil we-NC leveler udibanisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho...
I-NC servo feeder ene-uncoiler kunye ne-straightener
INKONZO YENKONZO YENC I-servo feeder ene-uncoiler kunye ne-straightener idibanisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops...
I-NC Servo Straightener feeder yokuqhobosha iipasita zokugcina isitampu
INKONZO YOKUFUNDA YENKONZO YENKONZO YOKUQINISEKISA IIMPAWU ZOKUGQIBELA I-NC Servo Straightener feeder idibanisa i-feeder / i-straightener ene-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho...
Isixhasi se-Decoiler straightener sokwenza izinto ezixineneyo
I- DECO ILER STRA IGHTENER FEEDER MACHINE YEMALI YESITHILI SESITHUTHA Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer 3 Kwindawo enye oomatshini bokugcina uyilo luhlanganisa i-feeder / i -enerator kunye nomatshini oshukumayo. I-loop ye-slack iphuhliswa...
KwiChina I-NC Servo Straightener feeders Abaxhasi
Uluhlu lwee- feed ze-NC zeServo Straightener zineemodeli ezahlukeneyo ezisebenza ngokuphezulu kwemigca yethu yokuhambisa ikhoyili ezilungele zonke iintlobo zeendaba.
I- NC Servo Straightener feeders Amacandelo:
I-Decoiler --- I-decoiler yenzelwe iikhoyili ezinobubanzi obungaphandle obufikelela kwi-1200mm. Ikhoyili ithathwa ukusuka phezulu ngaphesheya kwetafile yokutya. Ukufakwa kuphathwa nge-crane okanye nge-stacker. I-decoiler iyandiswa ngesandla okanye ngeHydraulic. Ikhoyili ithintelwe yi-pneumatic pressure roller.
Straightener-- I-roller ezisezantsi ezithe tye ziqinisekisa ukuqhubela phambili kwekhoyili kwimowudi yangaphambili kwaye zenza ukuba iikhoyili ziphinde zenziwe umva xa zibuyiselwa umva. Ukongezwa okongeziweyo kunye namaqengqelo okususa kuxhasa ukuqhubekiswa kweekhoyili ezahlukeneyo. Iziphumo ezithe tye zokufezekisa ziyafezekiswa ngokuhlengahlengiswa kwesandla somntu ngamnye we-rollers. Ukugoba okugoqekayo kumtshato wokutsala kuqinisekisa ukuhanjiswa ngokutyibilikayo.
Ukuhambisa usondeza-- Ukutya okuqengqelekayo, okuqhubekisela phambili izixhobo zekhoyili kwicala eline-infeed, kuqhotyoshelwe kumaphephandaba kusetyenziswa ibrakethi yokuncamathisela. Oku kwenza ukuba ukwazi ukuziqhelanisa neemeko zokuphakama kweshushu. Iqhutywa yiyunithi yokuqhuba ngqo ye-servo kwi-roller esezantsi. Zombini i-feed roller zinobunzima be-chromeplated kunye ne-ventilation ekhawulezayo ye-roller ephezulu yenziwa ngokwe-pneumically.
Isixhobo sokuphatha i-Coil kaMayflay silungele iTier 1 kunye ne-2 abathengisi bezithuthi kunye nabathengisi bensimbi abanikezela ngeemarike ezahlukeneyo ezinje nge-aerospace, izixhobo zombane, izixhobo zaselwandle, izixhobo zelenzi kunye nokunye.
Izixhasi zeServo Straightener Cinezela i-feedener-feeder / i-uncoiler Iinkqubo zekhoyili zecompact Abaphathi bekhoyili kunye nabaLungelelanisi Cinezela feedi Umxhasi weServo Straightener Umxhasi weServo-Straightener